War Deg Deg Ah: Banaan Bax goordhaw ka bilowday magaalada Muqdisho (Daawo Sawirada)
0 Wednesday September 13, 2017 - 13:28:57
Waxaa goordhaw banaan bax aad ay ka qeyb qaadanayaan boqolaal dadweyne ah ka bilowday qeybo kamid ah magaalada Muqdisho, banaan baxan ayaana ah mid lagu taageerayo Xukuumada Soomaaliya.
Wasiir Taageeray Dhiibistii C/Kariin Qalb-Dhagax oo xilka laga qaaday (Digreeto)
0 Wednesday September 13, 2017 - 12:34:44
Wareegto kasoo baxday Xafiiska Madaxweyne kuxigeenka maamulka Puntland Cadixakiin Xaaji Cabdullahi Cumar Camey ayaa xilka looga qaaday Wasiirru Dawlihii Madaxtooyada ee Xirirka Gobolada Puntland Bashiir Cabdiraxmaan Xaaji Gurhan.
Wararkii Ugu Dambeeyay Kulanka Baarlamaanka oo Socda iyo Xildhibaanada oo labo garab u kala qeybsan
0 Wednesday September 13, 2017 - 11:56:13
Daawo Sawirada: Muran ka dhashay Sawir uu Daanyeer iska qaaday iyo Maxkamad go'aan ka gaartay
0 Tuesday September 12, 2017 - 12:15:43
0 Tuesday September 12, 2017 - 11:24:30
Madaxweyne Farmaajo oo booqday Xero Imaaraatka ku tababaraan Ciidanka Kumaandooska
0 Saturday September 09, 2017 - 13:34:41
Madaxweynaha Jamhuuriyada Federaalka Soomaaliya ayaa maanta booqday Xero lagu tababaro ciidanka Kumaandooska Soomaaliya, waxaana xeradan gacanta ku haya kuna tababara ciidanka Kumaandooska Dowlada Imaaraaka Carabta.
War Deg Deg Ah: Kulankii Baarkamaanka oo Baaqday iyo sababta oo la ogaaday
0 Saturday September 09, 2017 - 12:41:11
Waxaa baaqday kulankii saaka lagu waday in xarunta golaha Shacabka ku yeeshaan Baarlamaanka Soomaaliya ,kadib markii uu buuxsami waayay kooramka loogu tala galay in uu kulanka ku furmo. Xarunta Golaha Shacabka waxaa gaaray Xildhibaano tiro yar oo u badnaa kuwa mucaaradsanaa Xukuumada Soomaaliya gadaalna…
War Cusub: Inta badan Xildhibaanadii diyaariyay Mooshinka Xukuumada oo Go'aankooda bedelay
0 Saturday September 09, 2017 - 11:45:39
Xildhibaano katirsan Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya una badan Xildhibaanadii kooxda Damul Jadiid ayaa diyaariyay Mooshin ka dhan ah Ra'isul Wasaaraha Xukuumada Soomaaliya Xasan Cali Kheyre.
Ilmo dhalan Mudo bil ah oo 7- Ilkood usoo baxeyn !!! (Daawo Sawirada)
0 Saturday September 09, 2017 - 10:49:07
Dhaqaatiir u dhalatay dalka Hindiya ayaa ku guuleestay in cunug yar oo dhalan mudo bil ah ka saaraan 7-ilkood oo usoo baxay, waxaana arintan ay noqotay mid dad badan aad ula yaabeen si weyna loo hadal hayo.
Maxaa kasoo baxay Shirka golaha Wasiirada maanta ku yeesheen Muqdisho ?(Daawo Sawirada)
0 Thursday September 07, 2017 - 12:35:31
Golaha Wasiirrada ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta yeeshay kulankoodii caadiga ahaa oo uu shir-guddoominayay Ra'iisal Wasaaraha Xukuumadda Mudane Xasan Cali Kheyre. Arrimaha kulanka looga hadlay ayaa waxaa ka mid ahaa arrimaha amniga, ansixinta Hindise Sharciyeedka Batrooka, Heshiiska…
Ehelada Gabar lagu dilay Gobolka Bakool oo sheegay inaysan Shabaab aheyn Gabadhooda
0 Thursday September 07, 2017 - 11:43:30
Ehelada Gabar shalay ciidamada Dowladda ay ku dileen duleedka Degmada Xudur ee Gobolka Bakool, kadib markii lagu eedeeyay gabadhaasi inay ka tirsaneyd Ururka Al Shabaab.
Daawo Sawirada: Qax ka socda Florida iyo Dukaamada oo cuntada laga dhameystay
0 Thursday September 07, 2017 - 10:53:19
Qax xoogan ayaa ka bilowday qeybo kamid ah dalka Mareykanka gaar ahaan gobolka Florida, waxaana gobolkaasi la filaaa in maalmaha soo aadan ay ku dhufato duufaanta xooga badan ee loogu magac daray Irma.
(Daawo Sawirro) Jaamacadda Benaadir oo daahfurtay Kuliyadda cusub ee Cilmiga Daawada (Pharmacy)
0 Thursday September 07, 2017 - 09:59:22
Jaamacadda Benaadir ee magaalada Muqdisho ayaa soo kordhisay sanadkan kuliyad cusub oo lagu baranayo cilmiga Dawooyinka taasoo si rasmi ah uga mid noqotay kuliyadaha ay horey laheyd Jaamacadda, iyadoo kuliyaddan ay tahay tii ugu horeysay nooceeda ee abid laga hirgeliyo Somalia.
Daawo Sawirada: Faras loo aqoonsaday kan ugu quruxda badan Dunida !!
0 Thursday September 07, 2017 - 08:08:32
Gamaanku wuxuu had iyo jeer ahaa qeyb kamid ah nolosha insaanka - u eegis la'aan waqtiga iyo casriga lagu jiro. Wuxuu lahaa qeyb weyn oo noloshu la'aantiis aysan suura-gal noqoteen. Hayeeshe qarniyadii danbe oo adeegsiga gaadiidka afar-lugoodka uu soo kordhay, ku tiirsanaanta Gamaanka aad bay…
Xildhibaano Kulan Deg deg ah ka leh Go'aankii kasoo baxay Xukuumada Soomaaliya
0 Wednesday September 06, 2017 - 13:34:11
Xildhibaano katirsan Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa kulan deg deg ah ka leh go'aanka maanta kasoo baxay Xukuumada Soomaaliya ee ku aadanaa Dhiibistii Dowlada Itoobiya loo gacan geliyay in C/Kariin Muuse Qalbi Dhagax oo katirsanaa Jabhada ONLF.
Xukuumada Somalia oo Go'aan Adag ka qaadatay Qalbi Dhagax iyo ONLF (Akhriso War-Saxaafadeed)
0 Wednesday September 06, 2017 - 12:39:24
Golaha Wasiirrada ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta yeeshay kulan aan caadi aheyn oo uu shir-guddoominayay Ra'iisal Wasaaraha Xukuumadda Mudane Xasan Cali Kheyre. Arrimaha kulanka looga hadlay ayaa ahaa arrimaha amniga Qaranka iyo dhacdadii sarkaalka Jabhadda hubeysan ee ONLF.
Maamulka Gobolka Banaadir oo ku dhawaaqay Mashruuc dib u dajin loogu sameenayo Barakacayaasha ku nool Magaalada
0 Wednesday September 06, 2017 - 11:44:39
Gudoomiyaha Gobolka Benaadir ahna Duqa Magaalda Muqdisho Mudane Thaabit Cabdi Maxamed ayaa maanta daah furay Mashruuc dib u dajin loogu sameenayo Barakacayaasha ku nool Magaalada Muqdisho.
Kulan xasaasi ah oo ka socda Xafiiska Raiisal Wasaare Khayre
0 Wednesday September 06, 2017 - 10:51:01
Wararka inaga soo gaaraya Xafiiska Raiisal Wasaaraha Somaliya Xasan Cali Khayre, ayaa sheegaya inuu halkaasi ka socdo kulan xasaasi ah oo u dhaxeeya Raiisal Wasaaraha iyo Golaha Wasiirada Xukuumadda Somaliya.
Fahad Yaasiin oo Farmaajo ka diiday inuu ka hadlo arrinta Qalbi Dhagax
0 Tuesday September 05, 2017 - 13:06:56
Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, Agaasimaha Guud ee Madaxtooyada Somaliya, ayaa Madaxweyne Maxamed C/laahi Farmaajo ku gacan-seyray in uu ka hadlo mowqifka Dowladda Somaliya ee wareejintii C/kariin Sheekh Muuse (Qalbi Dhagax).
C/Kariin Guuleed oo si deg deg ah uga Jawaabay Hadalkii Madaxweynaha DDSI
0 Tuesday September 05, 2017 - 12:01:51
Madaxweynihii hore ee maamulka Galnudug Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa si deg deg ah uga jawaabay hadal kasoo yeeray Madaxweynaha dowlada deegaanka Soomaaliya Cabdi Maxamuud Cumar, oo sheegay in heshiis horey ula saxiixdeen dowladii hore iyo Maamulkii Galmudug.
« Prev1 ... 45678910 ... 550Next »